> Resource> Mac> otú nyefee Music si iPod aka ka iTunes on Mac
Echefuola gị niile music on iTunes Library on Mac? Ma ọ bụ zụta a ọhụrụ Mac na kọmputa na chọrọ nyefee music si iPod aka ka iTunes on Mac? Ọ bụrụ otú ahụ, ị ​​na-nri ebe. iTunes nanị na-ahapụ gị nyefee iTunes zụrụ music si iPod aka ka iTunes. Dị ka ndị a na songs na ị na ebudatara ozugbo na iPhone ma ọ bụ jidere site n'aka ndị enyi n'ihi na iPhone, ị ga-atụfu ha ruo mgbe ebighị ebi. Iji zere nsogbu ma na-niile songs on iPod aka ka iTunes on Mac, ị kwesịrị ị na-eso nzọụkwụ n'okpuru. Isiokwu a bụ nzọụkwụ-site-nzọụkwụ ndu maka otú idetuo music si iPod aka ka iTunes Library on Mac.
Nzọụkwụ 1. Download iPod aka ka iTunes Mac software
Pịa Download na-Wondershare TunesGo (Mac). Ọ na-ahapụ ị nyefee niile music si iPod aka ka iTunes on Mac na otu click ma ọ bụ nyefee kpọmkwem iPod aka music ka iTunes on Mac. Mgbe nbudata, wụnye ngwa a na gị Mac kọmputa. Ọ bụrụ na ị nwere PC na-agba ọsọ Windows arụ ọrụ usoro ,, i nwere ike ịgbalị Wondershare TunesGo (Windows) ka nyefee music si iPod aka ka Windows PC.
Nzọụkwụ 2. Jikọọ gị iPod aka na Mac
Jiri eriri USB jikọọ gị iPod aka na Mac na ẹkedori TunesGo (Mac). Nke a iPod aka music ka iTunes Mac software ga chọpụta gị iPod aka na-akpaghị aka, na-egosipụta ya Ama na-amalite window. Wondershare TunesGo (Mac) n'ụzọ zuru ezu na-akwado iPod aka 5 na iPod aka 4-agba ọsọ na iOS 5/6/7/8/9.
Nzọụkwụ 3. Nyefee music si iPod aka ka iTunes on Mac
Nyefee niile music si iPod aka ka iTunes on Mac
Mgbe ịchọputa gị iPod aka ịga nke ọma, TunesGo (Mac) ga-egosipụta gị iPod aka. Na ala akara nke na-amalite window, e nwere otu nhọrọ: Iji iTunes. Pịa ya iji nweta a mmapụta dialog. Ọ ga-agwa gị otú ọtụtụ songs na listi ọkpụkpọ na gị iPod aka dị n'èzí gị iTunes Library. Pịa Export, ndị a songs naanị gị iPod aka ga-agafere iTunes on Mac. A na atụmatụ dị na Music window dị ka mma. Ọ dịghị oyiri uche dị.
Nyefee họrọ music si iPod aka ka iTunes on Mac
Mgbe ụfọdụ, i nwere ike chọrọ nyefee ọtụtụ egbu egbu songs si iPod aka ka iTunes on Mac. Ọ bụrụ otú ahụ, ị kwesịrị ị pịa Music na n'aka ekpe kọlụm. Ekem, ke Music window, ego songs on ekpe panel na pịa Mbupụ na iTunes.
Cheta na: Ị pụrụ ịhụ iTunes oyiyi-egosi na n'ihu ụfọdụ songs. Nke a na-egosi ndị a songs adị ma na gị iPod aka na iTunes.
Na-ekiri ndị Video nyefee iPod aka Music ka iTunes on Mac
Gbalịa mee ihe ndị TunesGo (Mac) software ịkwaga music si gị iPod aka ka iTunes on Mac!